Ukuphathwa kukaTrump kuhlela ukukhipha eminye imikhosi yezokuphepha kuPortland - teles
Abaphathi bakaTrump bahlela ukukhipha amanye amabutho ezokuphepha ePortland
Abaphathi bakaTrump bahlela ukukhipha eminye imikhosi yezokuphepha ePortland, e-Oregon, ngemuva kwamasonto okuxabana nababhikishi.
UNobhala Wezokuphepha KwaseMelika uChad Wolf uthe lokhu kudalulwa kunemibandela yokuvikela amaphoyisa endawo ukuvikela izakhiwo zikahulumeni, okuyindawo okugxilwe kuyo kulokhu kungabibikho.
UMbusi we-Oregon uKate Brown uthe abasebenzisana nabaphathi bazoqala ukushiya idolobha elikhulu kakhulu kuhulumeni ngoLwesine.
IPortland inyakaziswe yizinsuku ezingama-62 zemibhikisho.
Zithini izikhulu zikahulumeni kanye nezombuso?
Esitatimendeni sakhe, uNobhala Wase-United States Wezokuphepha KwelaseMelika akazange abeke noma yisiphi isikhathi ukuthi ahoxe.
Kodwa uthe yena nombusi "bavumelene ngohlelo lokudidiyela lokuqeda umsebenzi wobudlova ePortland oqondiswe kumpahla yendawo kanye nabezomthetho."
"Lolu hlelo lubandakanya ukuba khona kwamaphoyisa aqinile e-Oregon State ePortland. "
Ubuye wengeza ngokuthi "ezomthetho wezwe nowasekhaya bazoqala ukuphepha izakhiwo kanye nemigwaqo, ikakhulukazi izakhiwo ezizungezile ezihlangene."
Umbusi uthulule ngoLwesithathu wathi: “Basebenza njengamabutho futhi baletha nodlame. Kusukela kusasa, wonke amaCustoms kanye ne-Border Protection kanye ne-ICE office bazobe besuka ePortland. "
Kepha wengezelele ukuthi abenzeli bohulumeni base-US Marshals Service kanye ne-Federal Protential Service bazohlala enkantolo, lapho bavame ukuhlala khona.
Ngemuva kwesimemezelo, uMnu uTrump, waseRiphabhulikhi, umemezele ukunqotshwa yi-tweeting: "Ukube uhulumeni wobumbano kanye nabasebenza ngokuqapha umthetho (Homeland) bebengayi ePortland ngesonto eledlule, kukhona ubungeke ube nePortland.
“Ubezoshiswa adutshulwe. Uma iMeya nombusi bengavumi ukuyeka ubugebengu nodlame lwama-anarchists nabahlaseli, uhulumeni wobumbano uzongena enze umsebenzi wokuphatha umthetho wasekhaya obekufanele awenze! "
legendAmaphoyisa azamile ukuhlakaza izixuku njengoba ziqala ukuhlangana phambilini kusihlwa ngoMsombuluko
Amaphoyisa kahulumeni athunyelwa lapho ngoJulayi 4 ukuvikela izakhiwo zikahulumeni ezonakaliswa phakathi namasonto emibhikisho emelene nokubandlululwa kwabantu kanye nesihluku samaphoyisa ngemuva kokushona kukaGeorge Floyd, indoda emnyama engenazibhamu, eMinneapolis, eMinnesota, kungenzeka.
Ukuhanjiswa kwabo kubhebhethekise udweshu lwezombango, ikakhulukazi lapho izithombe zababhikishi zithathwa emigwaqweni ngabaphathelene nohulumeni baphoqwa ukuba bangene ezimotweni ezingabaliwe.
UMbusi wasePortland neMeya uTed Wheeler, bobabili amaDemocrat, bakhala ngokuthi akakaze afune ukungenelela kombuso, bakubize ngokuthi ukuhlanganisa konyaka wokhetho lukaMongameli.
IMark O Hatfield Federal Courthouse enkabeni yedolobha isiphenduke inkundla yempi yasebusuku, enamaphoyisa asebusweni kanye nababhikishi balimala ezimpini zegazi.
Ngokusho kwe-eregonlive.com , odokotela, izintatheli kanye nababukeli bezomthetho nabo balinyazwe yizinhlamvu zenjoloba nezinhlamvu zepepele abaxoshwa ngabameli bakahulumeni.
Kanye nokuqhekeka ePortland, abaphathi bakaTrump bathumela abasebenza ndawonye emadolobheni amaningana ase-Democrat-egcwele i-US ashaqekile ngobugebengu obukhulayo bezibhamu: IChicago, iKansas City, ne-Albuquerque.
UMnyango Wezobulungiswa waseMelika uthe ngoLwesithathu nokuthi izothumela nezikhulu zombuso kwamanye amadolobha amathathu aholwa yiDemokhrasi - iCleveland, iDetroit neMilwaukee - ngenxa yokwanda kobugebengu obunobudlova, ikakhulukazi ukubulawa kwabantu besifazane.
Ukuphathwa kukaTrump kuhlela ukukhipha amanye amabutho ezokuphepha ePortland
I-United States isuse amabutho acishe abe ngu-12 eJalimane ekuhambeni "ngamasu"
Ukulwa ne-COVID-19: Izinhlelo ze-TV ze-CRTV Setha Ukuqalisa Futhi Ngokuhlonishwa Okuqinile Kwezinyathelo Zokuvinjwa